कोरोनाको घरेलु पद्धतिको उपचार खोज्नुपर्छ, कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाही » Enavanari
कोरोनाको घरेलु पद्धतिको उपचार खोज्नुपर्छ, कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाही
काठमाडौं :कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न परम्परागत र घरेलु उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।बुधबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका सभामुखहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा शाहीले परम्परागत उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले चीनमा घरेलु र परम्परागत उपचार पद्धति नै प्रभावकारी देखिएको बताए ।
‘चिनियाँहरुले तातो बाफ लिएर, तातो दूध, अदुवा, लसुन, बोझो खाएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाए । परिणाममा चीनमा कोरोना रोकथाम भएको छ भने हामीले घरेलु उपाय किन नअपनाउने ? शाहीले भने ।
पुर्खाहरूले कोरोनाजस्ता ठूला महामारी सामना गरेर आएको भन्दै उनले परम्परागत र घरेलु उपचार पद्धतिबाट पनि कोरोनाको सामना गर्नुपर्ने बताए ।
अहिलेका जस्ता आधुनिक अस्पताल र प्रविधि थिएनन् । तर, कोरोनाजस्ता महामारीको सामना गरेरै आएका हुन् । पुर्खाहरुले त्यस्ता रोगहरुकोविरुद्धमा जो औषधि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यो कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन सक्छ’ उनले भने ।
सभामुख शाहीले तत्काल परम्परागत र घरेलु उपचार पद्धतिबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘तितेपातीको चिया खाऔँ, नुनपानी खाऔँ, तातो दूध खाऔँ, बाफ लिऔँ, चर्पी तातो राख्ने जस्ता सरल स्वास्थ्य जानकारीलाई ब्यापक रुपमा जगाउनुपर्छ ।’
तितेपातीको चिया कुन र कति मात्रामा खाने भन्ने विषयमा भने बैद्यसँग सल्लाह लिनुपर्ने उनले सुझाव दिए । सभामुख शाही भन्छन्, ‘तितेपाती विभिन्न रोगविरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको छ । चिया खाँदा वा औषधिमा प्रयोग गर्दा मात्रा कति गर्ने के गर्ने ? भन्ने विषयमा वैद्यहरुसँग सल्लाह लिनुपर्छ ।’